PressRush: Iyo Polite Pitching Platform yeVanyori venhau Kuparadzira | Martech Zone
China, December 31, 2015 Muvhuro, Ndira 21, 2019 Douglas Karr
Mazuva ese ini ndinogashira makumi emipanda muinbox yangu. Mazhinji acho haana kunyorwa zvakanaka, mazhinji haana basa kune yangu saiti, asi panogara paine nugget yegoridhe mumurwi wePR spam saka ndinoteerera. Ini ndakagamuchira danda svondo rino uko iyo email yakaonekwa yakati siyanei zvakanyanya uye yakapa yakanaka podhi ruzivo kwandiri.
Ini ndinoda uyu mukana wekuzivisa iyo yeruzhinji hukama femu kune imwe mugumo nezve iko chokwadi kwenzvimbo. Kana ini ndaida iyo pani (iyo yaive pazasi pemabhatani), ini ndaifanira kungopindura kukero yeemail iyo yakabva. Iyo yakanaka nzira uye ine hunhu nzira kune veruzhinji hukama nyanzvi kuona kukosha neanokurudzira kana blogger ivo vari kutaurirana navo.
Ndichiri kupindura kune yakatarwa podhi, iniwo ndakatarisa chikuva icho chakanyorwa pa - Dhinda. NePressrush, unogona kumisikidza zviyeuchidzo pamusoro penyaya, kugadzira mapundu, ekutsvagisa vanokurudzira, uye kukudziridza tsika zvinyorwa zvekutumira kune. Uye panotumirwa mapango ako, ivo vanoshandisa nzira yandinotsanangura pamusoro apa.
Ini ndinotenda zvakasimba kuti mhinduro haisi yekutumira mamwe mapaki. Mhinduro ndeyekuvaka hukama hurefu kwenguva refu kutanga neako wega, kunyatso tsvagurudzwa, kwakanangwa zvakanyanya, uye kunyatsoita nguva kusvika. Ndiine PressRush, ndakagadzirira kuvaka chishandiso chekukubatsira iwe kuita izvo chaizvo. Ville Laurikari, Muvambi wePressrush.
Kuvaka runyorwa kuri nyore kushandisa yemukati yekutsvaga injini yeVanyori venhau. Heino mhedzisiro ye analytics uye metric, kwaunowana yako zvechokwadi:
Uye kana iwe ukabaya paprofile yangu, unogona kuwana zvese zvinyowani zvinyorwa zvandakaburitsa pamwe nehukama kumaprofayiri angu enharaunda nekero yeemail.
Zvinangwa zvinogona kusefeterwa nezera, nzvimbo uye kutsikisa. Izvo zvinogona zvakare kurongwa nekudzokorora kana kukosha. Paunenge iwe wadzokorora wega wega mutapi venhau, unogona kuvawedzera kune yakatarwa midhiya runyorwa iyo inogona kutorwa pasi kana kukandwa kune. Zvakanakisisa pane zvese, sekushandurwa kweruzivo rwekufambidzana, zvinyorwa zvako zvinochengeterwa parizvino.
Saina Kuti Unyore Pressrush Trial
Tags: blogger inosvikajournalismoutreachkusvika emailkufambisa kutsvagamuchinaVille Laurikari